हे भग्वान यस्तो कसैलाई नपरोस, छोरा जन्मेपछि बाबुले संसार छाडे | कि-रिया बस्ने पैसा समेत छैन ! (भिडियो हेर्नुहोस्) – Khabar28media
हे भग्वान यस्तो कसैलाई नपरोस, छोरा जन्मेपछि बाबुले संसार छाडे | कि-रिया बस्ने पैसा समेत छैन ! (भिडियो हेर्नुहोस्)
July 13, 2021 - by Vikash - LeaveaComment
हे भग्वान यस्तो कसैलाई नपरोस, छोरा जन्मेपछि बाबुले संसार छाडे | किरिया बस्ने पैसा समेत छैन ! (भिडियो हेर्नुहोस्) अन्तिममा छ पुरा हेर्नुहोला ! यो अत्यन्तै जरुरी खबर पनि पढ्नुहोस्, कहिले काही पटक-पटक पिसाब लाग्छ। यसको एउटा मात्र कारण हुँदैन। सामान्यतः धेरै पानी वा तरल पदार्थ पिएको बेला पिसाब लाग्छ, जो स्वभाविक हो। त्यस्तै कहिले
मानसिक कारणले समेत पिसाब लागेको अनुभव हुन्छ। गर्भावस्थामा वा बुढ्यौलीमा पनि धेरै पटक पिसाब लाग्छ, जसलाई सामान्य मानिन्छ। तर, सामान्य अवस्थामा पटक-पटक पिसाब लाग्छ भने, त्यसले शारीरिक समस्याको संकेत गर्छ। के भनिन्छ भने, पिसाब कति पटक फेरिन्छ भन्ने कुराले समेत हामी कति स्वस्थ्य वा अस्वस्थ्य छौ भन्ने कुराको निक्र्यौल गर्छ। हाम्रो जीवनशैली वा स्वास्थ्य खराब भएमा पटक-पटक पिसाब लाग्न सक्छ।
मुत्राशयउको अत्याधिक सक्रियताको कारण पटक पटक पिसाब लाग्छ। मधुमेहको कारण पनि पटक पटक पिसाब लाग्छ । रगतमा वा शरीरमा शुगरको मात्रा बढेपछि यस्तो समस्या
आउन सक्छ । यदि यूरीनल ट्रैक्ट इन्फेक्सन छ भने यस्तो समस्या झेल्नुपर्छ। प्रोस्टेट ग्रन्थी बढेमा पनि पटक पटक पिसाब आउने समस्या हुन्छ।मृगौलामा संक्रमण भएमा धेरै पटक पिसाब आउँछ। यद्यपी यी समस्याको निदान घरेलु विधीबाट पनि खोज्न सकिन्छ। पर्याप्त पानी पिउनुपर्छ, जसले संक्रमण छ भने पिसाबको माध्यामबाट हटाउन सकिन्छ। दही, पालक, तिल, अलसी, मेथीको सब्जी दिनहुँ प्रयोग गरौ।
त्यसो भए के छ उपचार विधी ? एस्तो गरे धेरै राम्रो हुने डाक्टर बताउछन- सुख्खा अमला पिसेर चूर्ण बनाउने । त्यसमा सख्खर मिसाएर सेवन गर्नुपर्छ । भिटामिन सिले भरपुर खानेकुरा सेवन गर्नुपर्छ।अनारको बोक्रा सुकाउने र त्यसलाई पिसेर चुर्ण बनाउने। बिहान बेलुका यो चुर्ण पानीसँग सेवन गरौ। अंगुरको जुस, गाजर, अंकुरित गेडागुडी पनि फाइदाजनक हुनसक्छ।
हे भग्वान यस्तो कसैलाई नपरोस, छोरा जन्मेपछि बाबुले संसार छाडे | किरिया बस्ने पैसा समेत छैन ! (भिडियो हेर्नुहोस्)
Previous Article देउवाले लिन मानेनन् शपथ, नियुक्ति सच्याउनुपर्ने अडान
Next Article राष्ट्रपतिद्वारा प्रधानमन्त्रीलाई पद तथा गोपनीयताको शपथ, प्रचन्डले दिए बधाइ